“Amaah Ku Qaata Hudson-Odoi Laakiin Waan Idiin Ganaaxeynaa – Axadle
“Amaah Ku Qaata Hudson-Odoi Laakiin Waan Idiin Ganaaxeynaa
Chelsea ayaa meesha ka saartay xiisihii Bayern Munich ee Callum Hudson-Odoi iyagoo sharuudo adag ku daray heshiiskii amaahda ee ay kooxda Bundesliga ka dhisan ku dooneysay xiddigaan.
Bayern Munich ayaa muddo dheer xiiseyneysay Hudson-Odoi iyadoo xiisahooda laba jibaaray xagaagan laakiin ugu danbeyn waa ay ku guuldareysteen heshiiskii amaahda ee ay doonayeen.
Sida ay sheegtay jariirada Jarmalka ee Bild, markii ay Bayern Munich culeyska saartay soo xerogelinta Hudson-Odoi waxay dhowr jeer waceen gabadha agaasimaha ka ah kooxda Chelsea Marina Granovskaia taasoo sharuudo adag hor dhigtay kooxda Jarmalka.
Chelsea ayaa lagu waramayaa inay dooneysay inay dhowr sharuudood ku darto qandaraaska haddii uu amaah ugu wareegayo Bayern Munich, waxaa sharuudahaas ka mid ah in Chelsea ay lacag ganaaxi doonto Chelsea haddii aysan Hudson-Odoi ciyaarsiinin kulamo ku filan.
Blues ayaa soo kale dalbatay inay Bayern Munich qasab ku noqoneyso inay xiddiga garabka ka ciyaara ku iibsato 70 milyan ginni haddii uu gaaro tiro cayiman oo kulamo ah.
Sidaasi darteed heshiis kasta oo amaah ah oo ay ku qaadan laheyd kooxda heysata koobka Champions League waxay ku noqon laheyd mid ay lacag badan uga baxdo sidaasi darteed waxay burburiyeen wadahadalkii ay kula jireen Chelsea.
19 jirkaan ayaa ku soo bilowday labadii kulan ee ugu danbeysay ee Chelsea isagoo qasab ku soo galay shaxda kooxda, sidaasi darteed Blues ma aysan dooneynin inay fasaxaan.
Cristiano Ronaldo Oo Caawa Ka Hor Imaanaya Sergio Ramos Oo
Lionel Messi Oo Doonayey Inuu Jose Mourinho Dartii Ug Tago